Allgedo.com » Al-Shabaab-ka kusugan gobolka Sh/Dhexe oo ku dagaalamay duleedka Jowhar
Al-Shabaab-ka kusugan gobolka Sh/Dhexe oo ku dagaalamay duleedka Jowhar
Print here| By: allgedo.com: Saturday, December 1, 2012 // 2 Jawaabood
Wararka naga soo gaaraya duleedka magaalada Jowhar ayaa shegaya in ciidamo ka tirsan Alshabaab ay ku dagaalameen duleedka magaalada Jowhar ee Gobolka Shabeelaha Dhexe.
Duleedka magaalada Jowhar waxaa ku dagaalamay ciidamada Alshabaab oo qaarkood la shegay inay doonayeen inay kasoo baxsadaan magaalada si ay ugu biiraan Dowlada Soomaaliya.
Dhalinyarada goosan rabtay ayaa laga warhelay waxaana loo galay wadada iyadoo dagaalkaasi uu muddo daqiiqado socday.
Alshabaab kii doonayay inay baxsadaan ayaa seddex ka mid ah la qabtay kuwaasi oo saldhiga magaalada Jowhar lagu xeray halka sagaal kalana ay kasoo goosteen iyadoo aan la ogeyn halka ay ku sugan iminka.
Alshabaabka Jowhar ayaa waxaa soo foodsaaray cabsi xoogan kadib markii dhaqdhaqaaq ciidan ay ka bilowdeen duleedka magaalada Jowhar.
Dhalinyaradii kale ayaa la sheegaya inay usoo dhaqaaqeen dhanka degmada Balcad halkaasi oo Alshabaab lagala wareegay Lix bilood ka hor.
2 Jawaabood " Al-Shabaab-ka kusugan gobolka Sh/Dhexe oo ku dagaalamay duleedka Jowhar "
Sidoo kale Taliyaha Ciidamadda Dowladda Soomaaliya ee Gobolka Shabeellaha Dhexe C/Wali Ibraahim Maxamed, ayaa sheegay inay sahmiyeen wadada xiriirisa Magaalada Jowhar iyo Degmada Balcad, wuxuuse xusay inaysan wax iska caabin ah kala kulmin Xoogaga Shabaab, balse ay u sii baneeyeen sida uu yiri Magaalada Jowhar.
Xubno ka tirsan Golaha Wasiirada, Xildhibaano iyo Taliyaasha Ciidamada ayaa caawa ku hoyanaya magaalada Marka ee Xarunta Gobolka Shabellaha Hoose, halkaasoo maanta ay gaareen.